Fa efa teraka ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra | Apg29
Fa efa teraka ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra
Ny hoe olom-pirenena any an-danitra dia zavatra mahafinaritra.
Eny, toy izany koa ny zom-pirenena any an-danitra. Tsy azo novidim-bola. Izany dia tahaka ny zom-pirenena romanina i Paoly. Mahazo izany ara-pahaterahana, ny fahateraham-baovao amin'ny alalan'ny famonjena an'i Jesosy.
Ny ankamaroan'ny olona manana faniriana ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra. Fa lavitra rehetra hahatakatra fa tsy maintsy ateraka indray, izay namonjy ny nahatongavana tamin'izany.
Te-hitady fanohanana ny filazana izany, ka nampiasa andininy ao amin'ny Baiboly, indrindra ny Salamo. 87: 3-4
"Zava-malaza no anambarana anao Ry tanànan'Andriamanitra Andriamanitra. DRahaba sy Babylona Aho no milaza fa ny fahotan'ny hafa; Indro Filistia sy Tyro, Ary Kosy, ary ireo teraka teo. "
DRahaba sy Babylona efa niaiky ny anaran 'Andriamanitra, ary ny Tompo efa nahatsikaritra azy. Rehetra teraka tany Ziona ireo.
Romana 10: 9-10 hoe: "Fa raha manaiky amin'ny vavanao ianao an'i Jesosy Tompo sy mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao. Fa amin'ny fo ny finoana dia fahamarinana ary amin'ny vava fibabohana no hovonjena. "
Rehefa mahatsapa ny fahateraham-baovao ary ho tonga "olom-baovao ao amin'i Kristy Jesosy (2 Kor. 5:17).
Sal. 87: 5: "Eny, Ziona hilazana hoe: 'Izao sy ireroa samy efa teraka teo. Ary ny Avo Indrindra no mampitoetra azy. ' "
Andininy faha-6: "Eny, ny Tompo rehefa manoratra ny firenena, dia hanisa hoe: 'Ity no efa teraka teo.'"
Rehefa Tian'i Andriamanitra ny olona any an-danitra, dia manantena Amin'izay nateraky ho any amin'ny fanjakany. Dia ireo izay tonga ao.
Ao amin'ny Asan'ny Apostoly. 22: 27-28 converses Kol Lysia sy miara-Paul. Kolonely manontany i Paoly:
"Lazao amiko: Romana va ianao?"
Paoly mamaly hoe: "Eny".
Ary hoy ny kolonely:
"Manana izany lafo vola be mba hividianana izany voninahitra izany."
Mamaly i Paoly:
"Izaho anefa, efa teraka."
Ny hoe olom-pirenena any an-danitra dia zavatra mahafinaritra. Raha misy olona tsy ateraky indray amin'ny alalan'ny famonjena, dia hiaina eto an-tany fahafoizako. Ny iray mahatsapa fa "eto amin'ity tontolo ity aho, dia tsy ny an-trano", araka ny voasoratra eo tranainy hira. Ao amin'ny hira voatanisa hoy koa: "Tsia, ny faniriako dia ny any an-danitra amin'ny firenena."